လိုလားတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မကြာခဏ porn စွဲအခိုင်အမာ ဒဏ္myာရီတစ်ခုပါ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်သည်းခံခြင်း (လေ့ကျင့်ခန်း၊ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း) သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများမခံစားရပါဟူသောသီအိုရီအပေါ်တွင်။ မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့မသာ porn အသုံးပြုသူများသည် နှင့် Clinician သည်းခံစိတ်နှင့်ဆုတ်ခွာနှစ် ဦး စလုံးသတင်းပို့, 60 ကျော်လေ့လာမှုများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
ဤစာမျက်နှာတွင်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများတွင်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြသည့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် - လေ့လာမှုအနည်းငယ်မှသာရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုမေးမြန်းရန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအနည်းငယ်သုတေသနအသင်းများကို ရှိ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်း porn အသုံးပြုသူများမှာသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြု။
ပြန်လည်ထူထောင်နေစဉ် porn အသုံးပြုသူများသည်မကြာခဏအားဖြင့်တုန်လှုပ်ကြသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်သူတို့၏ရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများပြင်းထန်မှုအမှန်မှာ၊ ဆေးစွဲသူတစ် ဦး ဦး အားဆေးစွဲရန်ရောဂါလက္ခဏာပြရန်မလိုပါ။ ပထမဆုံးဘာသာစကားကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။သည်းခံစိတ်မဟုတ်သလိုဆုတ်ခွာမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုများအတွက်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ် ..."ဟုအဆိုပါ DSM-IV-TR နှင့် DSM-5 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်။ ဒုတိယ, အဖန်ဖန်-ထပ်ခါတလဲလဲ sexology "စစ်မှန်သော" စှဲမှားယွင်းစွာ conflates ပြင်းထန်, အသက်အန္တရာယ်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုကြသည် ဇီဝကမ္မမှီခို နှင့် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။ စာပေ၏ဤ 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှတစ်ဦးကောက်နုတ်ချက် (ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို):
စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများရှိရမည်ဟုအခိုင်အမာပြောရာတွင်၊ (ပါရဂူဘွဲ့များစွာအပါအ ၀ င်) ပါရဂူများအနေဖြင့်အလိုအလျောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်လူသစ်ကိုမှားယွင်းစွာရှုပ်ထွေးစေသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို နှင့် စှဲမွဲမှု။ ဤဝေါဟာရများသည်အဓိပ္ပာယ်တူမဟုတ်ပါ။ Pro-porn PhD နှင့် Concordia ရှိပါမောက္ခဟောင်း ဂျင်မ်ပိုဖ် YBOP မှဝေဖန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ဆောင်းပါးတွင်ထိုအမှားမျိုးကိုကျူးလွန်မိသည်။ ဂျင်မ် Pfaus ရဲ့ "မှ YBOP တုံ့ပြန်မှုသိပ္ပံပညာရှင်ယုံကြည်စိတ်ချ: လိင်စွဲလမ်းနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါသည်"ဇန်နဝါရီလ, 2016)
သူကပြောပါတယ်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသနနှင့် မြောက်မြားစွာ Self-အစီရင်ခံစာများ အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတှေ့အကွုံမြားကိုသရုပ်ပြ ဆုတ်ခွာ နှင့် / သို့မဟုတ် သည်းခံနေခြင်း - အရာကိုမကြာခဏလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏ဝိသေသဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ဟောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုမှန်မှန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်သတင်းပို့ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်ယူ၏ဆင်တူနေသော: အိပ်မပျော်, စိုးရိမ်စိတ်, ယားယံခြင်း, စိတျအပွောငျးအလဲ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, နာမငြိမ်, ဆင်းရဲသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးသွက်ချာပါဒ, အပြင်ယောက်ျားတွေမခေါ်ကြောင်းလိင်စိတ်၏ရုတ်တရက်အရှုံး ကို 'flatline' ' (porn ရုပ်သိမ်းခြင်းမှပုံထူးခြားတဲ့) ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏နောက်ထပ်နိမိတ်လက္ခဏာ မှီခို ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများမှတင်ပြသောသတင်းမှာညစ်ညမ်းမှုကိုရနိုင်ခြင်း (သို့) ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးမပြုဘဲအော်ဂဇင်ပြုမှုမရခြင်းဖြစ်သည်။ ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုမှပေါ်ပေါက် လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြuseနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြaddနာများဆက်စပ်နေသည့်လေ့လာမှု ၃၅ ခုကျော် (ထို fအဆိုပါစာရင်းထဲတွင် irst7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေကဲ့သို့) ။
ဆန်းစစ်ချက် #1: တစ်စုံတွဲအပြင်းအထန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ (2012) နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကုထုံး - သည်းခံခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းစသည်တို့ကိုဆွေးနွေးထားသည်
သင်တန်း #2- ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုအကျိုးဆက်များ (2017) - ဤလေ့လာမှုကအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုနိုင်သည့်အခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါသလား (ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာ) - ၂၄% သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကိုသုံးပုံတစ်ပုံဟာသူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဆန်းစစ်ချက် #3: အမူအကျင့်စွဲအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက် Out-of ထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုမှု? - လာမည့်လေ့လာမှုကို (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှ ၂၂ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည်) သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ ၎င်းကို“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” တွင်တွေ့ရသည်။
ဆန်းစစ်ချက် #4: အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS) (2017) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး - ဤစာတမ်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံများအပြီးလုပ်သောပြuseနာရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာကိုတီထွင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ယခင်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်မတူဘဲဤမေးခွန်း ၁၈ ခုပါသောမေးခွန်းလွှာသည်အောက်ပါမေးခွန်း (၆) ခုကို အသုံးပြု၍ သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည်။
မေးခွန်းတစ်ခုစီကို Likert စကေးမှ ၁ ခုမှ ၇ ခုအထိရရှိသည် - ၁ - ဘယ်တော့မှ၊ ၂- ခဲ၊ ၃ ရံဖန်ရံခါ၊ ၄။ တစ်ခါတစ်ရံ၊ ၅ - မကြာခဏ၊ ၆။ မကြာခဏ၊ ၇။ အားလုံးအချိန်။ အောက်ပါဇယားသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများကိုစုစုပေါင်းရမှတ်များအပေါ် မူတည်၍ အမျိုးအစား ၃ ခုခွဲထားသည် -“ Nonprobelmatic”,“ Low risk” နှင့်“ At risk” ။ အဝါရောင်လိုင်းသည်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။ porn အသုံးပြုသူများသည်သည်းခံမှုနှင့်ဆုတ်ခွာမှုနှစ်မျိုးလုံးကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလေ့လာမှုကတွန်းအား (သည်းခံမှု) နဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းတကယ်မေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူတို့နှစ် ဦး စလုံးကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကဖော်ပြခဲ့သည် အငြင်းအခုန်အဆုံး။
ဆန်းစစ်ချက် #5: တစ်အကြီးစားအမျိုးသားနမူနာ (2018) နှင့်အတူဘာဂန်-ယေးလ်လိင်စွဲလမ်းစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြုခြင်း။ ဤစာတမ်းသည်“ စွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းများအားပစ္စည်းစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံများအပြီးလုပ်ခဲ့သည့်ပုံစံကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ စာရေးသူများရှင်းပြသည့်အတိုင်းယခင်မေးခွန်းများသည်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကကျသည့်အချက်များကိုချန်လှပ်ထားသည်။
ဤလေ့လာမှုသည်“ ၂၀၁၇ သည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတည်ပြုသောရှေ့ 2017 လေ့လာမှုနှင့်အတူပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းသူများနှင့်လိင်စွဲလမ်းသူများသည်သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများမခံစားရဟုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းကိုငြင်းဆိုသည်။
ဆန်းစစ်ချက် #6: တစ်ဦးကကွန်ယက်ကိုရှုထောင့် (2018): နည်းပညာ-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေဆက်စပ်သေးကွဲပြားသောအခြေအနေများတစ်ရောင်စဉ်ဖွဲ့စည်း - အင်တာနက်လေ့လာမှု၊ စမတ်ဖုန်း၊ ဂိမ်း၊ ဆိုက်ဘာဆက်စသည့်နည်းပညာစွဲလမ်းမှု (၄) မျိုးအကြားထပ်တူကျမှုကိုလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။ တစ်ခုအပါအ ၀ င်ကွဲပြားသောစွဲလမ်းမှုရှိသော်လည်း ၄ ခုလုံးတွင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများပါဝင်သည် cybersex စွဲ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဆန်းစစ်ချက် #7: ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019). သည်းခံစိတ် / လေ့, အသုံးပြုခြင်း၏တင်းမာမှု, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, porn စွဲနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖြတ်သောအခါလိင်နှိုးဆွခံရဖို့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပိုပြီးအစွန်းရောက်အမျိုးအစားများလိုအပ်နေ: အဆိုပါလေ့လာမှု naysayers မတည်ရှိပါဘူးတောင်းဆိုအရာအားလုံးကဖော်ပြခဲ့သည်။ သည်းခံစိတ် / လေ့ / တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ related အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, ပင် Non- စွဲ၌တည်၏ (စွဲနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲ၏အဓိပ္ပါယ်သင်္ကေတ):
ခြွင်းချက်အချို့ မှလွဲ၍ ဤလေ့လာမှုတွင်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုခွဲခြားထားသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လက်ရှိသုံးစွဲသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဝိသေသလက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ရန်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောကိစ္စများဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ သို့သော်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာရေး ပို. ပို. လွန်ကဲညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာမြင်နိုင်ရန်လိုအပ်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်သူကိုစားသုံးသူများနှင့် ပတ်သက်. ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ပြထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအလားအလာအလားတူလိင်စိတ်နိုးထရောက်ရှိဖို့ပိုပြီးအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာမြင်နိုင်ရန်လိုအပ်နေကြောင်းမှဦးဆောင် desensitization နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ဆန်းစစ်ချက် #8: Abstinence သို့မဟုတ်လက်ခံ? ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Addressing အနေနဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနှင့်အတူယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2019) - စာရွက်တွင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲကပ်နေသည့်အမျိုးသားခြောက် ဦး အားသတိထားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ် (တရားအားထုတ်ရန်၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများနှင့်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများ) ကိုတင်ပြသည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသည်တရားအားထုတ်ရန်အကျိုးရရှိပုံရသည်။ ဤလေ့လာမှုများ၏စာရင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အချက်ကအသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာခြင်း (လေ့ကျင့်မှု) နှင့်တစ်ခုသည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ (အောက်တွင်မဖော်ပြထားပါ။ နောက်ထပ်လိင်မှုကိစ္စပြုမှုကူးစက်ခံထားရသောအက်ဒီ ၂ ခု။ )
သူသည်မိမိအညစ်ညမ်းကြည့်အစည်းအဝေးများများ၏ကြာချိန်အဖြစ်သူကြည့်ရှုအားပေးထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်ပက်ထရစ်ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ မှန်မှန်ပက်ထရစ် ပိုင်ရှင်မဲ့ကသူ့ကလေးငယ်ကိုသားထွက်ခွာနေစဉ်အချိန်တွင်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အညစ်ညမ်း watched ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန် living ည့်ခန်းထဲတွင်…
ဆန်းစစ်ချက် #9: အသက်ကြီးလူကြီးများ (2019) တွင်ကျဘာစွဲ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ - စပိန်ဘာသာတွင်၊ ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၆၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ အပါအဝင်ဆေးစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်တွေ့ရှိချက်များပါ ၀ င်သည် 24% သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအခါ, porn (စသည်တို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ယားယံခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း,) ရယူနိုင်ခြင်း။ ယင်းစိတ္တဇမှ:
ဆန်းစစ်ချက် #10: ပြProbleနာကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း - နည်းလမ်းသုံးမျိုးနှင့်ရောနှောထားသောနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (၂၀၂၀) - မကြာသေးမီကတရုတ်လူမျိုးလေ့လာမှုတွင်လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းသုံးခု၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများနှင့်ကုထုံးပညာရှင် ၃၃ ယောက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးဘာသာရပ် ၉၇၀ ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များ:
ဆန်းစစ်ချက် #11: မစဉ်းစားမဆင်ခြင်သောအမျိုးသားများ၊ ကုသမှုနမူနာတစ်ခုတွင်ပြmနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏လက္ခဏာများ - ကွန်ရက်ချဉ်းကပ်မှု (၂၀၂၀) - ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာများရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်း။ စင်စစ်အားဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်းသည်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
ဆန်းစစ်ချက် #12: တရုတ်နှင့်ဟန်ဂေရီရှိလူထုနှင့်နမူနာခွဲများတွင်ပြProbleနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS-18) ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (၂၀၂၀)
ဆန်းစစ်ချက် #13: ပြProbleနာများပိုမိုများပြားလာခြင်းအတွက်ရောဂါသုံးမျိုး (PH)၊ မည်သည့်အချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀) - နိဂုံးမှ:
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရလဒ်များအရညွှန်ကိန်းခြောက်ခုပါ ၀ င်သည့်“ ဆိုးကျိုးများ” အချက်သည် PH အတွက်အကူအညီလိုအပ်မှုကိုအများဆုံးတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းပြသသည်။ ဤအချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဆုတ်ခွာခြင်း” (အာရုံကြောနှင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်း) နှင့်“ ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးခြင်း” ကိုအထူးဖော်ပြလိုသည်” အခြားအခြေအနေများနှင့် PH ကိုခွဲခြားရာ၌ဤအညွှန်းကိန်းများ၏ဆက်စပ်မှုကိုယူဆထားသည်။23,28] သို့သော်ယခင်ကပင်ကိုယ်မူလသုတေသနအားဖြင့်ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ
ဆန်းစစ်ချက် #14: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း“ ပြန်လည်စတင်ခြင်း” အတွေ့အကြုံ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲဆိုခြင်းဖိုရမ် (၂၀၂၁) တွင် Abstinence ဂျာနယ်များ၏အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်) - အလွန်ကောင်းမွန်သောစက္ကူသည် rebooting အတွေ့အကြုံ ၁၀၀ ကျော်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များတွင်လူများကြုံတွေ့နေရသောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောဝါဒဖြန့်ချိမှုအများစုနှင့်ဆန့်ကျင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘာသာရေး၊ သုတ်ရည်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအစွန်းရောက်သူများကဲ့သို့) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာရန်ကြိုးစားသည့်အမျိုးသားများတွင်စက္ကူတွင်သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ဆန်းစစ်ချက် #15: ပြProbleနာ Hypersexuality များအတွက်သုံးရောဂါ; မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀) - သည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများသည်“ ပြproblemနာရှိသော hypersexuality” (လိင် / ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု) နှင့်ဆက်နွယ်သော်လည်းလိင်ဆန္ဒသည်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်ခဲ့သည်။
သည်းခံစိတ်ဆိုင်ရာနောက်ထပ်အထောက်အထားများ - ပိုမိုပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကျဆင်းခြင်းသည်“ ပြproblemနာရှိသော hypersexuality” အတွက်အကူအညီလိုအပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။